News | Bharatpur
News | Tag: Bharatpur
भरतपुर कारागार सार्ने तयारी
चितवन । जिल्ला कारागार भरतपुर रहेको ठाउँ साँघुरो भएपछि स्थानान्तरण गरिने भएको छ । सोका लागि जग्गा खोजीकार्य अघि बढाइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार कैदीबन्दीको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि फराकिलो ठाउँमा एक हजार क्षमताको कारागार निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ । हाल कारागारको क्षमता २८० भए पनि अहिले ७३० कैदीबन्दी छन् । बस्नेतले चार÷पाँच बिघा जमीन खोजी भइरहेको बताए । हाल कारागार रहेको ठाउँमा एक बिघा १३ कठ्ठा जमीन रहेको छ ।
भरतपुर महानगर पाराेमुक्त, घाेषणा हुन मात्रै बाँकी
चितवन । स्वस्थ शहरका रूपमा विकास हुँदै गएको भरतपुर महानगर पारो (मर्करी) मुक्त महानगर हुने भएको छ ।
उप-मेयरलाई ज्यान मार्ने धम्की आए पछि चितवन काँग्रेसकाे कडा चेतावनी
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाकी उप–प्रमुख पार्वती शाहलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको भन्दै नेपाली काँग्रेस चितवनले आपत्ती जनाएको छ । उप–प्रमुख शाहलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत् ज्यान मार्ने धम्की आएको जनाउँदै नेपाली काँग्रेस चितवनका सचिव उत्तम जोशीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनप्रतिनिधिको मनोबल गिराउने कार्यप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
भरतपुरकी उप-मेयरलाई ज्यान मार्ने धम्की, पेलेर जान खाेजेकाे गुनासाे
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाकी उप–प्रमुख पार्वती शाहले आफुलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको बताएकी छन् । उप–प्रमुख शाहले आज आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा आफुलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको बताएकी हुन् । उनले आफुहरूलाई बारम्बार पेलेर जान खोजिएको बताउँदै महानगरकै कर्मचारीहरूले समेत नटेरेको गुनासो गरिन् ।
भरतपुर महानगरका ६८ परिवार नदीबाटै जीवीकोपार्जन गर्दै
चितवन । स्मार्ट सिटीका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको भरतपुर महानगरपालिकामा बसोबास गर्ने ६८ परिवार नदीको भरमा जीवीकोपार्जन गर्दै आएका छन् । यहाँका नारायणी र राप्ती नदीमा माछा मारेर उनीहरुले जीवीकोपार्जन गर्दै आएका हुन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बग्ने ती नदीमा माछा मार्नका लागि निकुञ्जसँग अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
चितवन । एउटा अस्पतालमा उपचार गराउन आउने बिरामी र आफन्तका भरमा १५० होटल तथा रेष्टुराँ सञ्चालनमा आएका छन् ।
प्रचण्ड पढेको विद्यालयलाई पाकिस्तानी सहयोग
चितवन । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अध्ययन गरेको विद्यालयमा पाकिस्तानी राजदूतावासले १० लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरेको छ ।
भरतपुरमा फोहोर फाले १ लाखसम्म जरिवाना !
चितवन, मंसिर २१ । के तपाईं चितवन प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ ? सावधान हुनुहोस् है ! चितवनमा प्रवेश गर्दा अब जथाभावी रूपमा फोहोर फाल्न नपाइने नियम भरतपुर महानगरपालिकाले गरेको छ । यसरी फोहोर फालेको पाइएमा भरतपुर महानगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्था ऐन २०६८ को प्रावधान अनुसार जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई ५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।